Momba anay - Changzhou Suxing Century Apparel Co., Ltd.
Fahalavoana sy ririnina
Lohataona sy fahavaratra
Fahazoana ny filan'ny mpanjifa miaraka amin'ny vidiny tena ilaina sy ny serivisy kalitao
Efa nisy hatrizay 1996,Mifantoha amin'ny famokarana akanjo
fahamendrehana, ivon'ny mpanjifa, mifantoka amin'ny tsena, miorina amin'ny haitao, manome toky ny kalitao.
Ny orinasa Su Xing dia miorina ao amin'ny tanànan'i Changzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina. Orinasa manambatra ny famokarana sy ny varotra izy io. Niorina tamin'ny 1992, ny orinasa izao dia manana ny akanjo Changzhou Suxing Co., LTD Hubei Suxing akanjo Co., LTD Changzhou Suxing akanjo Co., LTD Ny orinasa dia manana andalana famokarana 10, mihoatra ny 580 ny mpiasa ary ny varotra isan-taona $ 55 tapitrisa. Tamin'ny 2012, nanangana ny Hubei Suxing Garment Co., LTD ny orinasa
Ny orinasa no orinasa mpamokatra akanjo lehibe indrindra any amin'ny faritr'i Liangzihu, tanànan'i Ezhou, faritanin'i Hubei. Manana mpiasa 980 sy tsipika fivoriambe 31 izy, miaraka amin'ny sanda famoahana 30 tapitrisa dolara isan-taona. Orinasa Su Xing mifikitra amin'ny sarotra, tsy fivadihan'ny filozofia momba ny asa aman-draharaha, nandritra ny taona maro nataon'ireo mpiara-miombon'antoka voatanisa lehibe. Nanjary orinasa lehibe an'ny orinasa changzhou sy Hubei eo an-toerana izy io. Fanamarinana maro, fanamarinana "ISO9001" ao an-toerana, fanamarinana American "Packaging (Global Garment Production Responsibility), fanamarinana RCS, fanamarinana RDS, fanamarinana fiantsonan'ny fitaovam-piadiana lavitra, HIGG SLCP, sns. Fandrosoana orinasa varotra any ivelany "," fahamendrehana kalitaon'ny orinasa sinoa "," Changzhou Garment Industry Association "filoha lefitry ny orinasa sns.
F: Ahoana ny fomba hanombohana tetikasa?
A: Hanombohana ny tetikasanao dia alefaso aminay ny sary famolavolana miaraka amin'ny lisitr'ireo fitaovana, habetsahana ary famaranana. Avy eo, ho azonao ny teny nalaina avy tao aminay tao anatin'ny 24 ora.
Q: Tsy zatra ny fitaterana iraisam-pirenena izahay, ho tantinao ve ny logistika rehetra?
A: Azo antoka. Ny traikefa an-taonany maro sy ny mpandeha miasa maharitra dia hanampy antsika amin'izany. Tsy afaka mampahafantatra anay ny daty fanaterana fotsiny ianao, ary avy eo ianao dia handray ny entana any amin'ny birao / trano. Ny olana hafa dia avela ho antsika.
F: Maharitra hafiriana ny santionany?
A: Matetika ny santionan'ny prot dia maka 3day, fa ny santionan'ny sms dia maka 7-10 andro.
Benniu Town Xinbei Distrika Changzhou Jiangsu China
© Copyright - 2019-2020: Changzhou Suxing Century Apparel Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.